Akhris maqaal xiiso badan doqoni qufacday meel lagaraacayna ma’oga |
Akhris maqaal xiiso badan doqoni qufacday meel lagaraacayna ma’oga
Dawlada itoobiya heshiisyo badan oo heer caalami ah ayay gashay waxaana ka midahaa, inay xadido taranka/ korodhka tirada dadka ee dalka, miisaaniyad aad u tiro badana waxaa lagu siin jiray kor u qaadida isticmaalka “Qorshaynta qoyska” ama “Family planning” iyo program yo kale oo bar-bar socday.
Qiimayno badan oo lasameeyay ayaa lagu xaqiijiyay itoobiya inayna sidii larabay uga midha dhalinin arinkaas, walow ay kamid noqotay dawladaha ugu roon dalalka africa ee natiijo muuqata ka gaadhan kor uqaadida isticmaalka qorshaynta qoyska.
Taasi waxay keentay in tirada dadka dalku aad u korto/ukorodho siguud, iyo tiradka da’yarta ah (dhalinyarada) si gaar ahaaneed.
Arintaas kumayna farxin dawladihii miisaaniyada badan u siin jiray walina ku siiya. Xoola rag waa xisaab kugu maqan oo ujeeday ka lahaayeen markay maalkooda kugu kharash garaynayeene malaga yaabaa inay tab/strategy yad kale ooy ku xafidaan/ku badh yaraynayaan u dagiyeen dalka itoobiya (lafo halgari iyagaa layku jabiyaa) si aan la fah’mayn.
– Dad aan koray u arag hawo/laydh dimuqraadiyadeed, ayaa layidhi free baad u tihiin rabitaankiina iyo dareen kiinaba. Taasina waxay keentay in qolo waliba halyaygeedii tabeele wayn sawir kiisa ku soo daabacato, calankiisiina soo howadaan, isla markaasna ay kasoo horjeedsadaan/diidaan halyayadii/geesiyadii iyo calamadii qowmiyadaha kale, kadibna foodaa la isdaray dhimasho, dhaawac, dhac/boob iyo barakac badan ayaa dhacay/socda.
– Ururo/xisbiyo siyaasadeed oo muddo dheer saaxiibo dhow la ahaa reer galbeedka lagana yaabo inay u nug’laadeen fulintan/hir galinta danaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska ayaa dalka dib ugu soo noqday danahoodii siyaasadeedna ka fushadaan dalka gudihiisa. Arinkan ayaa isaguna sababay in la qabto fagaarayaal aad moodo isula faanto, dhoolatus iyo ismuujin/awood muujin. Fagaarayaashaasi waxay dhaliyeen ficiltan siyaasadeen oo kadhexeeya qowmiyadaha iyo ururada siyaasadeed, kooxaha iyo shaqsiyaad caan ah (activistis) kuwaasoo taageerayaal badana leh, is abaabul (qowmiyad ku salaysan) horleh na wada, goob kasta ooy tagaana waxaa ka dhacay/kadhacaya shaqaaqooyin isku dhacyo khasaaro naf iyo maalba leh.
Halkaas aan kaga hadho dhacdooyinka iyo shaqaaqoonya dhiilada xambaarsan oon usoo daadago muhiimada si koobana aan u dhigo.
Bulshada dalka itoobiya waa cusub ayaa u baryay oo isbadal siyaasadeeda siduu dooniba haku yimaadee. Waxaa loo xusul-duubayaa hanashada hogaanka dalka, hanashada kaalin muhiim ah hadiiba aad waydo kogaanka guud. Si taa loogaadhana waxaa socda is abaabul, isbahaysi/is xulafaysi/iskarabsi wajiyo kaladuwan leh dana siyaasadeed iyo qowmiyadeed ku salaysan. Dibu habayn lagu samaynayo shuruuc da dalka si loogu sii gogolxaadha hanashada hogaanka dalka ee mustaqbalka (2020 election), iyo arimo kale oo badan.
Dhoohaneey adigu halkeed kaga jirtaa tartankaas loo tafa xaytay sidii ninwaliba ama qowmiyad waliba xaqeeda iyo xuquuqdeeda u heli lahayd mustaqbalka dhow iyo ka fog labadabs, xitaa hadii ay hanan kariwaayaan hogaanka guud ee dalka? Ma waxaad lasoo istaagi aniga waa la i guumaystaa oo ima khusayso loolanka qowmiyadaha itoobiya udhaxeeya? Caran, caas-caas, dhaan-dhaan, sawac ah oon dhibkii soomaray iyo dhacdooyinkii hore/history ga aan waxba ka baranaynin/lesson learned miyaana ahayn kolkaas?
Dakanadii ingiriiskuna (Koofil) wali way ku daba socotaaye ogow oo ha noqonin “Doqoni qufacday meel laga raacayna ma’oga”.
Muwaadin, aqoonyahan, indheer-garad, xildhibaan/xil-gas yaad ka sugi xal’ka aayaha umadaada?
W/Q qoraa shaafici daahir